Walaloo – Page 7 – siifsiin
Kaleessi hara’a hin ta’u, borus miti iftaan Wanta takkaa darbe hin qaqqaban bullaan Yeroon nama miti na eegis hin jedhan Yoo yerootti qoosan ofiin gaabbaa hafan Namni har’arra taa’ee kaleessaan of tuulu Jireenyasaa ari’aa kan darbeen madaalu Isa boruu dhiisee kan tureen of kuulu Maaddii one arraba boru quufee hin bulu Har’a ta’eet malee dur … Continue reading Yeroon nama hin eegu
January 9, 2019 January 28, 2019 Leave a comment
ABIDDAAN MAAF TAPHATTAA?
Abiddi hamaadha Abiddaan maaf taphattaa Jireenya kee guutuu Maalif of darartaa Hanguma abiddaa Wallaalteetii laataa Mee waa’ee abiddaa Waa xiqqoo siif kaasaa Kan biyya alaa miti Kan biyyuma keessaa Kan ijaan argine Kan gurraan dhageenye Kan dhaloonni nuuf kenne Yaa abidd! Garjabummaa kee Eenyutu siif ibsaa Citaa irraa gubdee Yoom dhiifte baaxii isaa Kanattis hin … Continue reading ABIDDAAN MAAF TAPHATTAA?
abaaluun gaariidhaa, arjaafi mishoomaadhaa. abaluun namaa miti fakkii bineensaati,innimoo? ishiin moo?nama seetee? bar namaa miti.jechuu namoota hinuma dhagayan anis darbee darbee kanuman fayyadamaa jecha biraa dhabee. mee namni dhugaadhaa kan akkamiitii laataa? guddina qaamaa,furdinafi dheerinaa ykn gabaabina, kaameeettuummaafi bareedina fuula tolummaa moo qajeelina simmboo, namni dhugaadhaa kan akkamiitiboo? dhiiroo maali mee madaallin namummaa? safartuun eessa … Continue reading Abalu
YAADANNOO Maaf calliftan? Iyyaa, iyya labsaa dhaamsa waliif dabarsaa guca bilisummaa qabadhaa dafaa, gamtaan birmadhaa muka guddaa, Odaatu jige malkaa obaa, maddatu goge urjii Afrikaatu dhidhime ifaa bilisummaatu dhaame gaaddisa gurraalee hambaa gootolee hayyuu qarootu nurraa godaanee kana calliftuu, garaa jabaattuu dandeessanii obsituu? aayyoleen siiqqee qabadhaa aabbootiin bokkuu qabadhaa iyya gaafoo birmadhaa ya Waaqi nu … Continue reading Maaf calliftan?
Ashamaa Akkam jirtuu?
Ashamaa Akkam jirtu? Kallattii arfan irraan lammiileen koo martuu Nagaan sin gaafadhaa ashamaa akkam jirtu? Dur oromoon akkasitti walitti dhufu, Safuufi aadaa liqimsa,malee aakkifatee hin tufu, Harka lamaan hiixatee haammatee wal dubbisa, Hidda godhadhu' jedhee eebbisee wal guddisa, Hi' jedha dhaloonni ammaa immoo quba lama ol qabee, Haammatee wal dubbifnaan hoo silaa maqaasaatu cabee, otoo … Continue reading Ashamaa Akkam jirtuu?
May 9, 2018 January 28, 2019 Leave a comment